Jaona 6: 1-71
Jaona 5 Jaona 6 Jaona 7
Rehefa afaka izany, dia niala Jesosy ka lasa nita ny Ranomasin'i Galilia, dia ny Ranomasin'i Tiberiasy izany.
Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary.
Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra, dia nipetraka tao mbamin'ny mpianany.
Fa efa akaiky ny Paska, ilay andro foravoravoan'ny Jiosy.
Ary Jesosy nanopy ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona Azy, dia hoy Izy tamin'i Filipo: Aiza no hividianantsika mofo hohanin'ireo?
Izany no nataony mba hizahany toetra azy; fa Izy nahalala ihany izay efa hataony.
Filipo namaly Azy hoe: Na dia mofo vidina denaria roan-jato aza tsy ampy azy rehetra hananany kely avy.
Ny mpianany anankiray, dia Andrea, rahalahin'i Simona Petera, nilaza taminy hoe:
Misy zazalahy aty manana mofo vary hordea dimy sy hazandrano madinika roa, fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao?
Fa hoy Jesosy: Asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo. Ka dia nipetraka ny lehilahy, tokony ho dimy arivo no isany.
Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin'izay nipetraka hihinana Izy; ary ny hazandrano koa araka izay nilainy.
Ary rehefa voky ny olona, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: Angony ny sisa tsy lany, mba tsy ho very.
Dia nangoniny, ka nahafeno harona roa amin'ny folo ny sombitsombin'ny mofo vary hordea dimy, izay ambiny tsy lanin'ny nihinana.
Ary hoy ireny olona ireny, rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy: Ity tokoa no Ilay Mpaminany Izahy ho tonga amin'izao tontolo izao.
Ary rehefa fantatr'i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra.
Ary rehefa hariva ny andro, dia nidina ho any amin'ny ranomasina ny mpianany.
Ary niondrana an-tsambokely izy, dia nita ny ranomasina nankany Kapernaomy. Ary efa maizina ny andro tamin'izay, nefa Jesosy tsy mbola tonga tany aminy.
Ary ny ranomasina nanonja, fa mafy ny fifofofofon'ny rivotra.
Ary rehefa nivoy tokony ho dimy amby roa-polo na telo-polo stadio [Na: dimy na enina kilometatra] izy, dia nahita an'i Jesosy nitsangatsangana eny ambonin'ny ranomasina ka nanakaiky ny sambokely; dia natahotra izy.
Fa hoy Jesosy taminy: Izaho ihany; aza matahotra.
Dia ta-handray Azy ho eo an-tsambokely izy; ary niaraka tamin'izay ny sambokely dia tonga tamin'ny tany izay nalehany.
Nony ampitson'iny ny vahoaka izay nijanona teny am-pitan'ny ranomasina dia nahita fa tsy nisy sambokely hafa teo afa-tsy iray ihany, ary Jesosy tsy mba niara-niondrana an-tsambokely tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha,
kanefa nisy sambokely hafa avy tany Tiberiasy tonga teo akaikin'ilay tany nihinanany mofo, rehefa nisaotra ny Tompo, -
koa nony hitan'ny vahoaka fa tsy teo Jesosy, na ny mpianany dia niondrana an-tsambokely izy ka nankany Kapernaomy hitady an'i Jesosy.
Ary rehefa nahita Azy teny am-pitan'ny ranomasina izy, dia hoy izy taminy: Raby ô, oviana no tonga teto Hianao?
Jesosy namaly azy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Mitady Ahy hianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky.
Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen'ny Zanak'olona anareo; fa Izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase.
Dia hoy ireo taminy: Inona no hataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra?
Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinoanareo Izay nirahiny.
Dia hoy ireo taminy: Inona ary no famantarana ataonao, mba ho hitanay ka hinoanay Anao? Inona moa ny asa ataonao?
Ny razantsika nihinana ny mana tany an-efitra araka ny voasoratra hoe: Mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny (Sal. 78. 24).
Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra; fa ny Raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra.
Fa ny mofon'Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao.
Ary hoy ireo taminy: Tompo ô, omeo anay mandrakariva izany mofo izany.
Hoy Jesosy taminy: Izaho no mofon'aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony.
Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita Ahy ihany hianareo, nefa tsy mino.
Izay rehetra omen'ny Raiko Ahy no hanatona Ahy; ary izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy.
Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon'Izay naniraka Ahy.
Ary izao no sitrapon'Izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny Ahy, fa hatsangako indray amin'ny andro farany izy.
Fa izao no sitrapon'ny Raiko, dia ny hahazoan'izay rehetra mijery ny Zanaka ka mino Azy fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany.
Dia nimonomonona tamin'i Jesosy ny Jiosy, satria Izy nanao hoe: Izaho no mofo izay nidina avy tany an-danitra.
Dia hoy ireo: Tsy Ilehio va ny Jesosy, Zanak'i Josefa, Izay fantatsika ny rainay aman-dreniny? Ahoana no dia anaovany ankehitriny hoe: Izaho nidina avy tany an-danitra?
Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Aza mimonomonona hianareo.
Tsy misy olona mahay manatona Ahy raha tsy taomin'ny Ray Izay naniraka Ahy; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany.
Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: Ary izy rehetra dia hampianarin'Andriamanitra (Isa. 54. 13). Izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny Ray no manatona Ahy.
Nefa tsy nisy nahita ny Ray, afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra: Izy no nahita ny Ray.
Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino no manana fiainana mandrakizay.
Izaho no mofon'aina.
Ny razanareo nihinana ny mana tany an-efitra, nefa maty ihany.
Ity no mofo izay midina avy any an-danitra, mba tsy ho faty izay mihinana azy.
Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra; raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy; ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao.
Dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe: Hataon'Ilehio ahoana re no fanome ny nofony hohanintsika?
Fa hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy mihinana ny nofon'ny Zanak'olona sy misotro ny rany hianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo.
Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany.
Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary Izaho kosa ao aminy.
Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra; tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty ihany; fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay.
Izany teny izany no nolazainy tao amin'ny synagoga, raha nampianatra tao Kapernaomy Izy.
Koa maro tamin'ny mpianany, nony nandre, dia nanao hoe: Sarotra izany teny izany, iza no mahahaino izany?
Ary fantatr'i Jesosy tao am-pony fa nimonomonona tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy Izy taminy: Mahatafintohina anareo va izany?
Mainka fa raha mahita ny Zanak'olona miakatra ho any amin'izay nitoerany taloha hianareo.
Ny fanahy no mahavelona; ny mofo tsy mahasoa na inona na inona; ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana.
Fa misy sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika Azy.
Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen'ny Ray azy izany.
Hatramin'izany [Na: Noho izany] dia maro tamin'ny mpianany no nihemotra ka tsy niara-nandeha taminy intsony.
Dia hoy Jesosy tamin'ny roa ambin'ny folo lahy: Hianareo koa va mba te-hiala?
Simona Petera namaly Azy hoe: Tompo ô, hankany amin'iza moa izahay? Hianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay.
Ary izahay mino ka mahalala fa Hianao no Ilay Masin'Andriamanitra.
Jesosy namaly azy hoe: Tsy Izaho va no nifidy anareo roa ambin'ny folo lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly?
Fa Izy nilaza an'i Jodasy, zanak'i Simona Iskariota; fa izy io no ilay efa hamadika Azy, nefa isan'ny roa ambin'ny folo lahy.